Franck Ribery Oo Kashifay In Uu Iska Diiday 7 Kooxood Oo Waaweyn Oo Reer Yurub Ah & Sababta Oo Uu Sharaxay – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 16, 2019 kooxda Bundesliga, Wararka Maanta 0
Xiddiga garabka weerarka uga ciyaara kooxda Bayern Munich ee Franck Ribery ayaa sheegay in ay 7 kooxood oo reer yurub ah doonayeen adeegiisa xagaagii 2009 laakiin uu go,aansaday in uu iska sii joogo kooxda Bayern.
Xiddiga reer France ayaa Bayern Munich ku soo biiray laba sano ka hor wakhtigaas isaga oo 25 milyan oo euro kaga soo biiray kooxda Marseille inkasta oo ay kooxda reer Germany heshay dalab 60 ilaa 80 Milyan oo euro ah oo uu iska diiday Uli Hoeness.
“Waxa ay ahayd waali xilli ay 7 kooxood oo waaweun doonayeen adeegayga sida Juventus, Inter, AC Milan, Chelsea, Real Madrid, Barcelona & Manchester United”ayuu Ribery u sheegay Bild Sport.
“Fikrado Badan ayaa ku soo biiray Madaxayga mana ahayn mid fudud”.
“Miyaad garanaysaa waxa uu Uli Hoeness ii sheegay? Barcelona waxa ay haystaa Lionel Messi, Madrid waxa ay haystaa Cristiano Ronaldo Anaguna waxa aan haysanaa adiga”.
“Mid ka mid ah go,aanadii ugu fiicnaa waxa uu ahaa in aan doortay in aan sii joogo Bayern Munich waana mid ka fiican wixii aan abid rajayn lahaa, waa in aan u mahad celiyo Uli Hoeness iyo wakiilkayga mar kale”.
“Uli Hoeness ayaa ii yidhi iina sheegay: “Waxa aad timid markii aanan xitaa u soo bixin champions League, waanu wada kornay inaga oo wada jir ah”.